Maxay tahay lacagta ay sidday diyaaradda Nairobi ka timid ee lagu qabtay Muqdisho? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxay tahay lacagta ay sidday diyaaradda Nairobi ka timid ee lagu qabtay...
FG: lacagtan ma ahan lacagta la qabtay ee waa sawir kale
Ciidanka Saldhiga Booliska Garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cadde ayaa maanta Gacanta ku dhigay lacago ay sheegeen in si sharci darro ah lagu soo galiyay dalka, taas oo ay siday mid kamid ah diyaaradaha u kala goosha magaalada Muqdisho iyo Nairobi.Baaritaan dheeri ah ayaa xilligan Ciidanku ku hayaan dhacdadan.
Saadiq Adan Cali Doodishe, oo ah afhayeenka Booliska Soomaaliya oo BBC-da wareysi siiyay ayaa sheegay in abaare 9-kii subaxnimo saakay ay Booliska gacanta ku dhigeen lacag doolar ah oo si sharci darro waddanka lagu soo geliyay.
Afhayeenkla ayaa sheegay in lacagta ay ka timid magaalada Nayroobi inkastoo uu sheegay inuusan nala wadaagi karin cidda ay ka socotay iyo ciddii ay ku socotay iyo sidoo kale cadaadda lacagta.
“Sabata loo qabtay ayaa ah in shuruucda caalamaiga iyo tan waddankuba aysan ogolaanayn in lacag intaa la’eg oo aan la ogeyn meesha ay ku socota uu qof gacanta ku qaado, haddii si kale loo dhigana waa kontorabaan.”
Ma jiraan cid loo xiray tallaabadaan?
“Waxaa ilaa haataan loo xiray eedeysanihii waday lacagta wayna jiri kartaa cid kale oo ku lug leh, baaritaan ayaana weli wadnaa,” ayuu yiri Saadiq Adan Cali Doodishe.
“Marka waxaan oo kale ay dhacaan dalka shuruuc baa u taalla taas ayaana lamarin doona cid kasto oo ku lug leh laakiin inta ka horreysaa waxaa waajib ah in la xafido lacagta oo ay ammaan ahaato waxaana loo gudbin doonaa maxkamadaha caddaaladda gaar ahaan maxkamadda Gobolka Banaadir.”
Dhanka kale taliyaha Booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu boogaadinayo Ciidanka Saldhigga Booliska Garoonka Aadan Cadde.
Arrintaan ayaa imanysa iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo goor sii horreysay waraysi siinayay Tv-ga Shabelle ee xaruuntiisu tahay Muqdisho uu Kenya ku eedeeyay inay faro gelin ku hayso Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa oo la weydiiyay farqiga u dhaxeeya Itoobiya iyo Kenya ayaa sheegay in Itoobiya ay haatan joojisay farogelintii oo isbadal ka dhacay. Wuxuu sheegay in xilligii ay Itoobiya xukumaysay TPLF ay Soomaaliya farogelin ba’an ku hayeen.
Previous articleWararkii ugu danbeeyay ee magalada xamar iyo siyaasada murugsan ee ka jirta
Next articleMaxaa kala qabsaday F.C.Waraabe & Wasiir Goodax Barre “Somalia” oo Dood adag loo qabtay